Iihambo ezinde? Ezi zixhobo kunye nezixhobo ezingenakungabikho emotweni yakho | Uhambo lweNdaba
Iihambo ezinde? Ezi zixhobo kunye nezixhobo ezingenakungabikho emotweni yakho
Iindaba Zokuhamba | 20/05/2022 16:41 | ngokubanzi
¿Ngaba sele uyicwangcisile iholide yakho elandelayo? Ukwenza uhambo olude ngemoto kunokuzisa iingenelo ezinkulu, ezinjengolawulo olukhulu lokuhamba okanye ukufikeleleka okukhulu kwiindawo ekuyiwa kuzo. Nangona kunjalo, olu khetho lunakho ukungonakali: ukuthatha ulawulo lwesithuthi kunokubangela ukuvezwa okukhulu kwimingcipheko enokwenzeka okanye umthombo woxinzelelo.
qinisekisa imoto ngepolisi efanele iimeko zakho y jikela kwitekhnoloji inokwenza umahluko obalulekileyo. Akunjalo nje ngenxa yokuba siya kuba neziqinisekiso ezingakumbi zokhuseleko, kodwa nangenxa yokuba siya kufumana intuthuzelo. Okulandelayo, sabelana nawe a ukhetho lwezixhobo eziya kukunceda wenze uhambo lwakho lube ngamava onwabe ngakumbi. Qwalasela!
1 Iigajethi ezintlanu zemoto yakho ongenakuphoswa yiholide yakho elandelayo
1.1 Umthumeli weBluetooth FM
1.2 Isidlali seDVD esiphathwayo okanye ithebhulethi
1.3 ihumidifier yemoto
2 Ifriji ephathekayo
Iigajethi ezintlanu zemoto yakho ongenakuphoswa yiholide yakho elandelayo
Umthumeli weBluetooth FM
Ukusuka kunxibelelwano ngebluetooth, ulwazi lunokuhanjiswa ngendlela yomsindo. Isidluliseli se-FM sinokuthungelwa kuyo nayiphi na irediyo yesithuthi kwaye ingasetyenziselwa zombini dlala umculo ezigcinwe kwizixhobo eziphathwayo ezifana for yenza iifowuni ezingenazandla. Iimodeli ezininzi nazo zinamazibuko e-USB. Ngombulelo kwinkqubo yayo yokunxibelelana, ikuvumela ukuba usasaze ngeentambo.
Isidlali seDVD esiphathwayo okanye ithebhulethi
Enye yeengxaki eziphambili zokuthatha uhambo olude ixesha elikhulu lokufa elidlulayo ekufudukeni ngakunye, ingakumbi amaqabane omqhubi. Ukuba uceba ukwenza a hambani njengosapho kwaye nibe nabantwana abancinci, umdlali I-DVD ephathekayo okanye ithebhulethi Ngaphandle kwamathandabuzo, zezinye zezona ndlela zingcono. Kukho iintlobo ngeentlobo zeemodeli kwiimarike ezinomthamo omkhulu kunye nokuzimela. Ukongeza, uninzi lwazo zineendawo zokubeka iimemori khadi kunye noqhagamshelo lwe-USB.
Isibane esizimelayo sikaxakeka
Ukuthatha amanyathelo othintelo ngokuchasene neziganeko ezinokwenzeka kubalulekile. Ingxaki yomatshini, umzekelo, inokusinyanzela ukuba simise imoto, into ethi kwiimeko zokunciphisa ukubonakala inokusibeka esichengeni sobuthathaka obukhulu. Ngaphaya kwevesti ekhanyayo okanye koonxantathu abalumkisayo, kukho ezinye izixhobo ezinokunyusa iziqinisekiso zokukhusela. A ukukhanya okubonisayo kuvunywe yi-DGT unokwenza isithuthi sakho sibonakale kumgama ongaphezu kwekhilomitha, kungakhathaliseki iqondo lokubonakala kwindlela.
Ngaba unohambo olude oluphambi kwakho kwindawo ezomileyo zemozulu? Ukuba sele usebenzisa i Isikhuphi msi ofumisayo, uya kuwazi amandla ayo ukunciphisa ukungonwabi okubangelwa ngumoya owomileyo eluswini nasemqaleni. Ngoku kunokwenzeka ukuba ube nemodeli yemoto yakho. Ezi zixhobo ziphathwayo ziguquguquka ngokulula ngaphakathi kwesithuthi ngenxa yokunciphisa imilinganiselo yazo. Bane- ukuzimela okukhulu ngoko umphumo wayo ugcinwa ixesha elide. Uyilo oluninzi lubonisa izibane ze-LED kwaye zinokusetyenziselwa ukongeza ioyile efunekayo ukuze uphumle.
Ukuba ne-air conditioning akwanelanga kwi-wave wave, apho amaqondo okushisa angadlula ama-degrees angamashumi amane, anokuthi abe nefuthe elibi kwiziselo zethu. Ukugcina amanzi kulo lonke uhambo kubalulekile. Ngefriji ephathekayo yezithuthi unako gcina ukutya kwakho kunye neziselo zikwimeko egqibeleleyo. Ukwenza oku, kuya kufuneka uqhagamshele kwi-adaptha ye-cigarette lighter.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Iihambo ezinde? Ezi zixhobo kunye nezixhobo ezingenakungabikho emotweni yakho
Uninzi lweelali ezintle eAndalusia
Indawo ezishibhile eSpain